Intel uveza Next Generation edeskithophu - Izindaba Rule
Intel uveza Next Generation edeskithophu
CHIPMAKER Intel uye wethula kumadivaysi amaningana kuhlanganise ideskithophu PC powered by chips olusha nge Iris Pro ihluzo, naphezu PC emakethe ekunqandeni.
The new kuzinto ozayo kulo nyaka zihlanganisa PC mini futhi eziphathwayo wonke-in-one izinhlelo, okuyinto izoba Ready Mode Technology evumela ukuthi PC yokuxhumana ngisho nalapho kungcono in a state amandla okusindisa.
Intel wesine General core chip amandla Next Gen amadeski
Ikilasi entsha device a PC afakwa esithintwayo 20 nge battery kanye nekhono slot ibe esiteshini docking.
Deutsch: Intel core i7-970 phansi (Photo credit: Wikipedia)
Naphezu yokuncipha bendabuko PC desktop uhlelo kuqhathaniswa ne laptops namanye amadivayisi, Intel uthemba line yayo entsha ngeke avuselele PC emakethe ngizabalaza by amakhono ngokungeza owawuklanyelwe ukuba ukhange kokubili amabhizinisi kanye abathengi ngokufanayo.
“Ibhizinisi bekhompuyutha liyingxenye enkulu futhi libalulekile Intel, futhi thina imali kulo – reinventing kuzinto, nakho kanye nemikhiqizo kumakhasimende ethu,” wathi Intel VP, GM of Desktop yayo Client Platform Group, Lisa Graff.
Kanye encane PC ifomu factor ezifana NUC Intel (Unit Next of Computing), the chipmaker tikhombise i design yonke-in-one reference esibizwa Black Brook, okuyinto izici esithintwayo-Windows 8, isibonisi osayizi up to 27in, futhi ibhethri yangaphakathi ukuze ingasetshenziswa ngaphandle kokuba ukusebenza a isokhethi emdulini.
Black Brook kuhlanganisa oludidiyelwe Intel Realsense 3D ikhamera, nezinto Quad microphone, audio premium futhi HD full.
Intel futhi okuningiliziwe entsha kwesizukulwane sesine Core izilimi ozayo ngasekupheleni kwalo nyaka, kuhlanganise chip codenamed kaDeveli Canyon nge ekuthuthukiseni ezishisayo interface futhi CPU emaphaketheni ngalokwanele kute luvumele Overclocking, futhi I7 Core Extreme Edition asekelayo kuze kufinyelele cores kwayisishiyagalombili bese 16 imicu DDR4 inkumbulo ukweseka.
Intel wabuye wathi kuwo uyoba ideskithophu izinguqulo oluzayo sizukulwane lwesihlanu Core chips yayo codenamed Broadwell, oyoletha yayo Iris Pro ihluzo desktop ngokokuqala ngqa wokwethula umfutho in ihluzo ukusebenza.
Ready Mode Technology, okuyinto izotholakala kwi khetha OEM izinhlelo 2014, uchazwa ngokuthi elikwazi asizakale amandla okusindisa uthi wesine esizukulwaneni Core chips Intel ukunika amandla PC ukuze sihlale sikulungele futhi njalo axhunyiwe ngisho nalapho esimweni amandla okusindisa. Kungase isetshenziswe ukuqinisekisa ukuthi PC uhlale ekulungele usakaze abezindaba kwamanye amadivayisi ekhaya, ngokwesibonelo, ngokusho ngokuqinile.
Ngo-December, umhlaziyi Izingubo IDC wathi PC yokuthengisa unqabile mumbi khulu ukudlula ongakholwako bekulindeleke e 2013, Smartphones kanye amaphilisi waqhubeka linqobe imakethe ubuchwepheshe umthengi.
“Worldwide PC izimpahla yawela -10.1 amaphesenti angu ngonyaka odlule,” IDC wathi, athe ngaphezu projection yangaphambilini ye -9.7 amaphesenti angu, okwenza kube “kakhulu olunzima ukusikwa waminyaka yonke emlandweni”. m
Lesi sihloko, Intel uveza isizukulwane esilandelayo edeskithophu nakuba ngangingakwazi PC emakethe, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge
22394	0 Broadwell, Central processing unit, ekwi-desktop yekhompuyutha, Intel, Intel Core, Unit Next of Computing, ikhompyutha Personal, Windows 8
← Kubaduni Ihlasela NATO Sites ! Abantu bangaba ukuzwa trillion iphunga →